Ndị Juu ndị Juu na-emebiga ihe ókè na-eduzi US President Trump? | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Israel » Ndị Juu ndị Juu na-emebiga ihe ókè na-eduzi US President Trump?
Ndị Juu ndị Juu na-emebiga ihe ókè na-eduzi US President Trump?
Udo dị n’etiti Israel na Palestine ọ bụ ezigbo ebumnuche nke gọọmentị US dị ugbu a n’okpuru nduzi nke Onye isi ala Donald Trump?
Ndị na-eme udo n'America bụ ndị Juu America nyefere ndị White House ka ha na ya kparịta ụka. Ndị udo a nke America na-eme ihe ziri ezi na ndị Zionist. Ha bụ ndị otu onye isi ala US onye isi ala tụkwasịrị obi ime udo n'etiti Israel na Palestine. Ndị otu Trump megidere mkpebi obodo abụọ ahụ wee mata na ngalaba ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke United States.
Nke a bụ ihe Haaretz Newspaper na Israel kwupụtara ihe ọtụtụ kwupụtara na nzuzo.
N'izo aka na Jared Kushner, Jason Greenblatt na onye nnochite anya David Friedman, onye isi ndị omeiwu Arab-Israel bụ Ahmad Tibi kwusiri ike na ndị otu Trump megidere mkpebi obodo abụọ ahụ, wee mata ya na ngalaba ndị na-echegharị echegharị nke US Republican Party.
Na-ekwu okwu na Usoro Media, Tibi kọwapụtara nsogbu doro anya nke ịnwe ndị Juu America dịka ndị mkparịta ụka, mana kwughachiri ihe bụ nchegbu nke n'okporo ámá pro-Palestian ebe ọ bụ na ndị otu onye isi oche ọhụrụ ahụ doro anya: na nnupụisi aka nri nke oke nke ndị ozi atọ ahụ na Middle East bụ nnukwu nkwado nke nkwupụta ndị Palestaịn na ọ nweghị onye n'ime ha tozuru oke ikpezi usoro udo ma ọ bụ ọbụna sonye na ya.
“Ọ dịwo ogologo oge ha na-akwado mmebi iwu na-akwadoghị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ego,” ka ọ kọwara. “Ọ bụghị banyere eziokwu ahụ bụ na ha niile bụ ndị Juu, kama [ọ bụ] otú ha si bụrụ ndị na-emebiga ihe ókè.”
Ọ kọwara n'ihu na e nwere ọtụtụ ndị Juu tozuru oke nwere echiche "ezi uche" na US, mana maka ihe ụfọdụ, ndị ọchịchị America nke Trump duziri họpụtara ndị nnọchi anya "aka nri" ugbu a.
"Ha na-ezube ili ọrụ Palestian mba, na-ebibi nrọ Palestian nke iguzobe ala Palestine na East Jerusalem dị ka isi obodo ya na iwepu ikike Palestian," ka o kwuru.
Tibi rụtụrụ aka na Trump's Mideast otu chigharịrị iwu gbasara White House gbasara esemokwu Israel na Palestine “iji kwado usoro Netanyahu n’ogbe ahụ.”
Ọnụ na-ekwuchitere Palestine Authority (PA) Nabil Abu Rudeineh kwupụtara na The Media Line na PA anaghị ekpe ikpe n'okwu ndị a site na echiche okpukpe kama kama na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
"Anyị na-emeso ndị ọrụ nchịkwa America dịka onye nnọchianya nke amụma America, ọ bụghị okpukpe ma ọ bụ nkwenkwe," ka o kwuru.
Ọ bụ ezie na ọ gbakwụnyere, ìgwè ndị nnọchi anya ugbu a nwere otu echiche dịka ndị Israel, ma "mgbe ụfọdụ ka njọ."
”Ha jisiri ike duhie onye isi ala ha [ikwenye] na iwepu faịlụ Jerusalem na tebụl mkparịta ụka ga-edozi okwu ahụ; echiche nzuzu ha nakweere mere ka ọnọdụ ka njọ, ”ka o kwuru.
Iji mezuo nke ahụ, Abu Rudeineh kwusiri ike, ụzọ ndị otu ndị nnọchi anya Trump rutere kemgbe mbido ọrụ ha mepụtara oghere pụtara ìhè n'etiti ha na onye isi ala ha.
"Believesda na-ekwere na ngwọta obodo abụọ, mana ndị otu ya anaghị eme."
Ọzọkwa, ọ kwadoro na PA nwere nguzo siri ike na mmekọrịta ọ bụla nke ọchịchị America "dabere na ngwọta obodo abụọ ahụ nke na-eme ka steeti Palestine n'ọdịnihu dị na East Jerusalem dị ka isi obodo ya."
N'ajụjụ ọnụ nke Media Line na onyeisi oche nke Kọmitii Ntọhapụ Palestine Saeb Erekat na nso nso a, Erekat kọwara ndị otu Trump na Middle East dị ka "enweghị mmasị."
Ọ kọwara na ọ bụrụ na usoro udo bịara ịpụta ịtụle PLO otu ndị na-eyi ọha egwu, igbutu enyemaka nye ndị Palestine gbara ọsọ ndụ, ịkwaga ụlọ ọrụ nnọchi anya US na Jerusalem na ikwupụta na mmebi ahụ abụkwaghị iwu na-akwadoghị, mgbe ahụ “ndị ọchịchị America jisiri ike tinye m n'ọkwa dịka onye mkparịta ụka ebe enweghị ihe ọ bụla ga-efunahụ m, "ka o kwuru.
"Ọ bụ ọdịda-nke narị afọ, ọ bụghị nke narị afọ a," ka Husam Zomlot, onye isi nke ozi Palestine na United States gwara The Media Line. O kwudosiri ike na otu ndị nlekọta nke America na Middle East tụgharịrị "nkwekọrịta kachasị" na "oke ọdịda" site na ịnabata echiche Netanyahu ebe ọ na-enweghị ihe ọmụma na ahụmịhe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
"Onye praịm minista nke Israel jiri nnukwu njehie kpuchie ha [ndị nnọchi anya America Mideast]," ka Zomlot kwuru, na-ekwu maka ịkwaga ụlọ ọrụ nnọchi anya US na ibelata enyemaka na United Nations Relief and Works Agency dị ka "ịnụrụ otu akụkụ nke akụkọ ahụ na-enweghị nke ọzọ . ”
O mere ka o doo anya na n'ime afọ niile ọnọdụ American mere na esemokwu Israel na Palestine bụ maka esemokwu obodo abụọ dabere na mkpebi mba ụwa. Zomlot choro n'ihu na "mgbanwe mberede" na amụma ndị America anaghị anọchite anya ndị isi America ma ọ bụ echiche ọha mmadụ nke US.
N'oge na-adịbeghị anya, na mkparịta ụka na-adịghị ahụkebe na akwụkwọ akụkọ Palestine Al-Quds - n'oge njem mpaghara mba ise ya na mkparịta ụka ya bụ Greenblatt na Middle East - Kushner siri ọnwụ na ọ dị mkpa ịchọta ihe ngwọta na-echebe ugwu Palestine ma nweta obodo Palestine na ọwụwa anyanwụ Jerusalem dị ka isi obodo ya. Kushner kwuru na "azụmahịa-nke narị afọ" ga-adị njikere "n'oge na-adịghị anya," na-enye na gọọmentị America ka ọ fọrọ nke nta ịme ya.
Otú ọ dị, ọ maghị ma ọ bụrụ na Abbas nwere “ikike, ma ọ bụ dị njikere, ịdabere na ịmecha nkwekọrịta,” ka o kwuru.
Ugbọ elu Losuia meghere ma PNG Air maliteghachi ọrụ ikuku